Initiatives teratany eropeana 2019 | safidy
Favam-borona mirongo - endrika miafina
Tsy milamina eto izahay Amnesty Aleman
Fialan-tsasatra amin'ny tontolo Eco: Izay toerana mahasalama izao tontolo izao
Vola aroa tsy voafetra - Fahafahan'ny olombelona vaovao?
Efa mba namaky ireo fangaro ny shampoo ve ve ianao? ...
Ny laharam-pahamehan'ny olom-pirenena eropeana 2019
in asa, Global, Henoy, politika, manan-danja
ny Helmut Melzer 13. Septambra 2019, 16: 04 5.9k Views
Eto izahay dia manangona ny tetikasan'ny olom-pirenena lehibe eropeana. Hanombohana fandraisana andraikitra dia ilaina ny olom-pirenena 7 EU monina any amin'ny firenena mpikambana tsy ampy 7 farafaharatsiny ary mahatratra ny vanim-potoanan'ny fifidianana. Rehefa nahavita nanangona fanambarana fanohanana 1 tapitrisa ny hetsika iray ary nahatratra kely indrindra tamin'ny firenena mpikambana 7 farafaharatsiny, ny Kaomisiona eropeana dia tokony hanapa-kevitra raha hanao zavatra.
SORATRA NY ZANAKA INDRINDRA!
Fampahalalana bebe kokoa eto.
#1 Fiarovana amin'ny karazany manerana an'i Eoropa- "Tehirizo ny tantely"
Fiarovana amin'ny karazany manerana an'i Eoropa
Olom-pirenena eropeanina (=> Ny laharam-pahamehana ho an'ny olom-pirenena eropeana) dia nalamin'ny vaomiera eropeana. Misoratra anarana eto mba hanao sonia ny manam-pahaizana voalohany momba ny olom-pirenena eropeanina "famonjena ny tantely". Amin'ny fiandohan'ny volana jona dia ho vonona ny 2019, hanangona sonia 1 an-tapitrisany fara fahakeliny isika.
nampian'i Helmut Melzer 13. Septambra 2019, 16: 05
#2 Ajanony ny fiovan'ny toetrandro haingana, araka ny tokony ho izy ary mahomby
Ajanony ny fiovan'ny toetrandro haingana, araka ny tokony ho izy ary mahomby - Manohana ny toeran'ny toetr'andro ho an'ny olom-pirenena eropeanina
0} Greta dia nilaza fa "satria niova ny fitsipika" hanalefahana ny krizy. Hanao sonia ny ECI hanova ny lalàna momba ny toetr'andro.
nampian'i Helmut Melzer 13. Septambra 2019, 16: 07
#3 Trano ho an'ny rehetra
«Fiainana ho an'ny rehetra» ny olom-pirenena eropeana
Ny hetsika «Housing for All» dia mampiray ny fikambanan'ny mpanofa - sy ny sendika, ny sendika, ny fikambanana ara-tsosialy sy ny fiangonana, fikambanana miaro ny zon'olombelona, ​​vondrona mpiaro ny mpianatra, fisotroan-dronono, solontenan'ny tamba-jotra sy olona miady ho an'ny trano mora kokoa any Eropa. Isika dia miara-miasa ary miaraka amin'ny hafa hanangona sonia mihoatra ny iray tapitrisa ho an'ny Initiative Eoropeana Initiative.
nampian'i Helmut Melzer 13. Septambra 2019, 16: 08
#4 Farano ny vanim-potoanan'ny Cage
Farano ny vanim-potoanan'ny Cage
Ny ECI sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ONG 170 manerana an'i Eropa. Azafady mba mifandraisa amin'ireto vondrona ireto raha te hahare bebe kokoa amin'ny fikambanana miorina amin'ny firenenao ianao: jereo ny lisitr'ireo fikambanana eto.
#5 Fanalana ny fanafoanana ny hetra amin'ny solika
Tongasoa eto amin'ny tranokala Fairosene! Tsy marina ny dikan-teninay. Azonao atao ny mahita famintinana pejy iray amin'ireo fiteny ofisialy Eropeana marobe amin'ny fizarana fiteny. Saino ny fanangonan-tsonia ofisialy eto! Ny fandefasana fiaramanidina dia maneho ny 5% amin'ny fiovan'ny toetr'olombelona.
nampian'i Helmut Melzer 13. Septambra 2019, 16: 06
#6 MITOMPOANA ary manararaotra ny volan'ny EU
Ny tanjonay dia mikendry ny fisorohana ny fitondrana anti-EU, mpanao kolikoly tsy hampiasa ny volan'ny EU hitahiry ny fahefany. Ampio izahay hanatratra sonia 1 tapitrisa!
Amin'izao tontolo miova haingana ity dia mila ny vondrona eropeana matanjaka sy mahomby ary mavitrika ny olom-pirenena eropeana. Izany no hany tombony azon'ny firenena eropeana hitantana ny fanamby ara-toekarena, tontolo iainana ary politika ho avy.
nampian'i Helmut Melzer 13. Septambra 2019, 16: 09
Tsy misy lohateny
nampian'i Helmut Melzer 13. Septambra 2019, 16: 11
#8 Notondroina hoe tsy vegetarian / vegetarian / vegan
Trano - Famonoana sakafo misy takelaka / legioma / legioma
Hinan'ny hena / legioma / legioma. Hanampy amin'ny "Inform Choice" ho an'ny mpanjifa manerana an'i Eoropa izany. Hanao sonia ny safidin'ny Label Vegan, Vegetarian sy Flexitarian amin'ny fomba fiaina mahasoa amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​mampihena ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana ary manampy amin'ny ...
nampian'i Helmut Melzer 13. Septambra 2019, 16: 12
#9 Mihinàna TANJONA! Afafazo ny sakafonao
Ny fanitsakitsahana, ny fangalarana ary ny fanararaotana an-tsakany sy an-davany dia mety hampidi-doza ny fahasalamantsika, indrindra rehefa alikaola na fanafody poizina. Famantarana marika mazava iray manondro ny niandohan'ny fanafintohinan'ireo zavatra mampidi-doza manimba ny fahasalamam-bahoaka.
#10 Vonjeo ny tantely sy ny tantsaha
Ny Vaomiera eropeana dia nanatanteraka ny vinavinan'ny olom-pirenena vaovao eropeanina vaovao "Vonjeo ny tantely sy ny tantsaha"(" Vonjeo ny tantely sy ny mpamboly! "). Ny laharam-pahamehan'ny olom-pirenena dia hatao amin'ny 10. Oktobra, taty aorian'izay ny fikambanana tsy manohana 12 dia manana volana maromaro hanangonana sonia tapitrisa tapitrisa avy manerana ny Vondrona Eropeana.
nampian'i Helmut Melzer 17. Septambra 2019, 15: 05
Ampio ny fandraisanao anjara
picture Video Audio Text Ampidiro ny atiny ivelany
Tsy maintsy fenoina ity saha ity
Sariho eto ity sary
Manampia sary amin'ny alàlan'ny URL
Haben'ny data avo indrindra: 2 MB.
Tsy avy aminao? Mariho ny loharano
Manampy fanondroana / rohy?
Ekeko ny resaka fampiasana. Tsy maintsy fenoina ity saha ity Hamantatra bebe kokoa
Ampidiro eto ny horonantsary
Haben'ny data avo indrindra: 1 MB.
Ampidiro eto ny feo
Ahoana ny hevitrao momba izany?
Nosoratan'i Helmut Melzer
Amin'ny maha-mpanao gazety ela ahy dia nanontany ny tenako manokana ny fanontaniana aho, izay mety hahitana ny heviny amin'ny resaka fanaovan-gazety. Ny valiny azoko dia hitanao ato: Option. Maneho fifandimbiasana amin'ny fomba mirindra - ho an'ny fivoaran'ny fiaraha-monina.
Previous article Any ambony: mikraoba amin'ny renirano anglisy
Lahatsoratra manaraka James Corden dia naneho hevitra tamin'ny Fat Shaming Take Bill Maher
Bebe kokoa avy amin'ny: asa
in asa, Alternative sy hevitra, Aotrisy, Fiarahamonim-pirenena sy ONG
Tendrombohitra feno fako araka izay hitan'ny maso
in asa, Vaovao momba ny ONG, Aotrisy
System Change, fa tsy mpikatroka fiovan'ny toetr'andro ankehitriny ...
Ny hetsika ataonay izao dia misy hetsika maraina ...
ny eran-tany 2000
Aleo ajanony ny fako fako tsy miaraka! www.pfanddrauf.at ...
Moa ve tsy ho ela tsy ho glyphosate intsony ny sahan'i Aotrisy? ...
Andron'ny Bee - Ny hetsika manasonia!
in Alternative sy hevitra, Ny fanjifana maharitra
in politika, foiben'ny hery misintona, fiarovana ny tontolo iainana, Torohevitra video, Videos, manan-danja
in fanavaozana, Henoy, Ny fanjifana maharitra, Trends, fijery, manan-danja
Iza no te hisoroka ny rafitra fitahirizana? Ny lobaka fandotoana plastika
Farany, fanampiana bebe kokoa ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana: fonosana iraisam-pirenena Austro-COVID-19 famonjena miaraka amin'ny fanampiana vonjy maika 100 tapitrisa euros
Ny rafitry ny fanatontoloana tarihin'ny vondrona dia nahomby - niaraka tamin'ny video
Ny fijerena ao ambadiky ny seho nandritra ny fitifiranay ny "tantsaha mitady tantely"! Mpanelanelana ...
Salama! Iza no mbola mila kafe FAIRTRADE tena matanjaka ankehitriny? ...
100 Euro karama ho fankatoavana ny fiaraha-monina! 500 PTS.
-10% fihenam-bidy ao amin'ny Zwerkstatt - amin'ny zavatra rehetra!
10 Euro Voucher ho an'ny taovolo volo voajanahary
Inona no mahatonga an'ity?
DRAPAL GmbH - fomba amam-pianakaviana hatramin'ny 1948
Rehefa nanomboka nanolotra ny tenany ho ilay hery sarobidy ao amin'ny natiora ny orinasa DRAPAL 1948, mba hanomezana izany ho an'ny vahoaka ...
Ny ÖGNB dia mahita ny tenany ho tafo ho an'ireo orinasa, andrim-panjakana ary na ireo olona izay ...
Zwerkstatt - nanao t-shirt somary vazivazy sy haneso tena
Zwerkstatt dia marika t-shirt maharitra avy any Vienna ary malaza amin'ny vazivazy henjana. As ...
Te hanao fandraisana anjara amin'ny fiainana tsara ho an'ny rehetra izahay miaraka amin'ny vokatra. Ho tsara ...
Any ambony: mikraoba amin'ny renirano anglisy
James Corden dia naneho hevitra tamin'ny Fat Shaming Take Bill Maher